ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြီးကို အတူတူကျော်ဖြတ်ဖို့အားပေးထားတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ သီချင်းအသစ်လေး – Maythadin
ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြီးကို အတူတူကျော်ဖြတ်ဖို့အားပေးထားတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ သီချင်းအသစ်လေး
May Thadin | November 20, 2020 | Celebrity | No Comments
လတ်တလောမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီး စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေး နဲ့ပတ်သက်ပြီး နစ်နာမှုတွေရှိရသလို ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ ဝေးကွာနေရတဲ့အတွက် ဒီ ကပ်ရောဂါကြီးကို အားလုံး ကျော်ဖြတ်ချင်နေကြလောက်ပြီထင်ပါတယ် ။
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက အဖက်ဖက်က ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေသလို ပြည်သူတွေကလည်း ???? ?? ???? နေပြီး ကူညီ ကာကွယ်နေကြရတဲ့အချိန်ပါ ။လတ်တလောမှာတော့ ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို အားလုံးအတူတူ ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ခွန်အားပေးထားတဲ့ သီချင်းသစ်လေးတစ်ပုဒ်ကို တေးသံရှင် ဝိုင်းဆုခိုင်းသိန်းက
ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုတော် အောင်လကိုယ်တိုင်ရေးစပ်ပေးထားတဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ??’ ??? ???? @ ?- ???????? ကရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာပါ ။ ဝိုင်းစုကတော့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အမြန်ဆုံး ပြည့်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ဒီ ?? လေးကို အားပေးနားဆင်
ပေးကြပါဦးနော် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါသေးတယ် ။သီချင်းနာမည်လေးကတော့ “မျှော်လင့်ချက်” လို့အမည်ရပြီး သီချင်းလေး ????? ????? ဖြစ်မြောက်လာဖို့ အတွက် ?-???????? အဖွဲ့သားတွေ နဲ့ ????????- ?? ??? ???? က မေတ္တာနဲ့လာရောက်ရိုက်ကူးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ပရိသတ်ကြီးလည်း ဝိုင်းစုရဲ့ မျှော်လင့်ချက် သီချင်းလေးကို နားဆင်ရင်း ကိုဗစ်ကြီးကို အတူတူ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်လိုက်ကြရအောင်နော် ။
လတျတလောမှာ တဈနိုငျငံလုံး ကိုဗဈရောဂါဆိုးကွီးနဲ့ ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေပွီး စီးပှားရေး လူမှုရေး ကနျြးမာရေး နဲ့ပတျသကျပွီး နဈနာမှုတှရှေိရသလို ခဈြသူခငျသူတှနေဲ့ ဝေးကှာနရေတဲ့အတှကျ ဒီ ကပျရောဂါကွီးကို အားလုံး ကြျောဖွတျခငျြနကွေလောကျပွီထငျပါတယျ ။
ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေ အဖကျဖကျက ကူညီစောငျ့ရှောကျပေးနသေလို ပွညျသူတှကေလညျး ???? ?? ???? နပွေီး ကူညီ ကာကှယျနကွေရတဲ့အခြိနျပါ ။လတျတလောမှာတော့ ဒီရောဂါဆိုးကွီးကို အားလုံးအတူတူ ကြျောဖွတျနိုငျဖို့ခှနျအားပေးထားတဲ့ သီခငျြးသဈလေးတဈပုဒျကို တေးသံရှငျ ဝိုငျးဆုခိုငျးသိနျးက
ပရိသတျတှကေို ဝမြှေပေးလာခဲ့ပါတယျ ။ အဆိုတျော အောငျလကိုယျတိုငျရေးစပျပေးထားတဲ့ သီခငျြးလေးဖွဈပွီး ဒါရိုကျတာ ??’ ??? ???? @ ?- ???????? ကရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာပါ ။ ဝိုငျးစုကတော့ ပရိသတျတှေ အားလုံးရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ အမွနျဆုံး ပွညျ့ပါစလေို့ ဆုတောငျးရငျး ဒီ ?? လေးကို အားပေးနားဆငျ
ပေးကွပါဦးနျော ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးထားပါသေးတယျ ။သီခငျြးနာမညျလေးကတော့ “မြှျောလငျ့ခကျြ” လို့အမညျရပွီး သီခငျြးလေး ????? ????? ဖွဈမွောကျလာဖို့ အတှကျ ?-???????? အဖှဲ့သားတှေ နဲ့ ????????- ?? ??? ???? က မတ်ေတာနဲ့လာရောကျရိုကျကူးပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။
ပရိသတျကွီးလညျး ဝိုငျးစုရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြ သီခငျြးလေးကို နားဆငျရငျး ကိုဗဈကွီးကို အတူတူ ရငျဆိုငျကြျောဖွတျလိုကျကွရအောငျနျော ။
​စေတနာ့ဝန်​ထမ်းဆရာဝန်​ လုပ်ပြီးကူညီဖို့အတွက်​ကို ဖောင်ဖြည့်လိုက်တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
မင်းသားချော အောင်ရဲလင်းက​တော့ Stay Home ရင်းဖြင့်​ဆို့​အောက်​သွားပြီဟုသိရ
ညီလေးလိုခငျြတယျဆိုပွီး ပူဆာနတေဲ့ သားသားလေးကို ညကစြောစောအိပျဖို့သငျပေးလိုကျတဲ့ ဆုပနျထှာခငျပှနျးရဲ့အခှီဗီဒီယို
ယောကျြားမယူပဲ နညျးပညာနဲ့သားသမီးယူမယျဆိုတဲ့ ရဗေက်ကာဝငျး
ထိုငျးရောကျ လုပျသား ၁၇၁ဝ မိသားစုကို မွနျမာအစိုးရ စားသောကျကုနျထောကျပံ့
မှေးနမှေ့ာ ကခငျြရိုးရာဟငျးတှေ တကူးတကလာပို့ပေးသှားတဲ့ နခွေညျဦးကို မှေးနဆေု့တောငျးပေးခဲ့တဲ့ ဂြှနျလှငျ
ကနျြးမာရေး ဗဟုသုတ မရှိတော့ ဌကျပြောသီးကွောငျ့ ကလေးအသကျဆုံးရှုံးရပွီ
ဦးခေါငျးရအေိတျတညျရောဂါ ကလေးငယျတဈဦး ထပျဖွဈပွနျပါပွီ အလှူရှငျမြား အမွနျပျေါပါစေ